Iindaba zesiXhosa nge 21 eyeNkanga 2018 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa nge 21 eyeNkanga 2018
Izigrogiso kwabasebenzi bakwa Dis-chem yi National Union of Public Service
Imanyano yabasebenzi kwiinkonzo zoluntu i-National Union of Public Service and Allied Workers izikhabile iingxelo zokuba amalungu azo ahlasele aza agrogrisa abasebenzi abangekho kuqhankqalazo eDis-Chem. Le manyano yeNupasaw ithi ezi ziinzame nje zomqashi zokuzama ukuba kudizwe olu qhankqalazo njengelingekho mthethweni. AbakwaDis-Chem bathi kuye kwaleqiswa umsebenzi esibhedlele izolo emva kokubethwa entloko ngegilasi. Abasebenzi bathi ababuyi ngamva kwisigunyasiso sabo somvuzo weshumi elinesibini lamawaka eerandi. Umnumzana Success Mataitsane weNupsaw uthi aziyonyani iingxelo zezigrogriso.
kuphungulwa koxinzelelo lwamandla ombane kwaEskom
Nanjengoko kubonakala ngathi sele lifutshanisile ilixa lokuphungulwa koxinezelelo kumandla ombane kwilizwe loMzantsi Afrika, inkampani enkinkisha umbane u-Eskom ithi ineqhinga lokuthi thaca inkqubo yelixa elongezelekileyo likacimi-cimi wombane. Oku kuza emva kwengxelo yangeveki ephelileyo yokushokoxeka kwamalahle. Umlinganiselo ka-Stage 8 uzakuvumela ukuphungulwa komthwalo weeMegawatts ezingamawaka asibhozo kumandla ombane weli lizwe.
AmaKomanisi alwela ukunyuka kwaMaxabiso eeTaxi
Iphiko lolutsha lamakomanisi elizwe loMzantsi Afrika kwinkqila i-Brian Bunting avakalis’amakhwiniba malunga nokwenyuka kwamaxabiso eeTaxi okucetywayo ngomhla wokuqala kwinyanga yoMnga. I-YCL ithi ukwenyuka kwala maxabiso kuzakubangela ubunzima obumandla kubantu abangathathi-ntweni ingakumbi ngelixa apho ulutsha luthwaxwa mpela-yintswela-ngqesho. Lo mbutho uthi bazakuxhwaxeka ngamandla abantu abahlala kwiilokishi ezifana neDelft abaphangela edolophini eKapa. Uthi abahlali bazakuntyumpa-ntyumpeka nangakumbi ematyaleni ngenxa yemivuzo emincinane abayifumanayo. Unobhala wenkqila kwi-YCL umnumzana Bongile Zanazo uthi bahlab’ikhwelo kumphathiswa wezothutho kweli phondo kwakunye norhulumente ukuba enyuse inkxaso-mali yezithuthi zikawonke-wonke aze amilisele intlawulo ezinzileyo yokukhwela kwizithuthi zikawonke-wonke
uPhando labantwana abaxinezelelwe yindlala
Uphando lakutshanje lufumanise ukuba zizigidi ezintathathu zabantwana abasaphila bantsi kweemeko ezingathethekilyo zendlala. Le ngxelo, ikhutshwe liziko labantwana kwiYunivesithi yaseKapa kwaye iphonononga imeko yabantwana minyaka le. Iziko labantwana lithi izinga lokuba ngaphantsi kweqondo lendlala lichazwa ngokwemeko apho iintsapho zabantwana zixakwa kukubeka efafileni nentwana yokutya efunekayo ekuphileni komntu. Ophuma kweli ziko uKatherine Hal uthi bazizigidi ezintandathu abantwana abaphantsi kweli qondo kwaye kukho imfuneko emandla yentsebenziswano phakathi kweentsapho norhulumente khon’ukuze kuphuculwe iimeko zokuphila zabantwana.